Androidsis dia tranonkala Internet AB. Ao amin'ity tranonkala ity dia mikarakara ny fizarana ny vaovao rehetra momba ny Android izahay, ny fampianarana farany feno ary ny famakafakana ireo vokatra manan-danja indrindra amin'ity ampahan'ny tsena ity. Ny ekipa manoratra dia mazoto amin'ny tontolon'ny Android, miadidy ny milaza ny vaovao rehetra amin'ity sehatra ity.
Hatramin'ny nanombohany ny taona 2008, Androidsis dia nanjary iray amin'ireo tranonkala miresaka ao amin'ny sehatry ny smartphone Android.
Ekipa mpanonta Androidsis dia misy vondrona iray Manam-pahaizana momba ny teknolojia Android. Raha te ho anisan'ny ekipa koa ianao dia afaka andefaso aminay ity takelaka ity mba ho tonga mpanonta.
Teraka tany Barcelona, ​​Espana, teraka tamin'ny 1971 aho ary liana amin'ny solosaina sy ny fitaovana finday amin'ny ankapobeny. Ny rafi-piasa tiako indrindra dia ny Android ho an'ny fitaovana finday ary ny Linux ho an'ny solosaina finday sy birao, na dia tsara be aza izany amin'ny Mac, Windows, ary iOS. Ny zavatra fantatro rehetra momba ireo rafitra miasa ireo dia nianarako tamin'ny fomba nampianarin-tena, nanangona traikefa mihoatra ny folo taona eo amin'ny tontolon'ny fitaovana finday Android!
Mpanoratra sy tonian-dahatsoratra manokana amin'ny Android sy ny gadget, finday avo lenta, smartwatches, azo itondra ary izay mifandraika amin'ny geek rehetra. Niditra an-tsehatra tamin'ny tontolon'ny teknolojia hatramin'ny fahazazako aho, ary nanomboka teo, ny fahalalana bebe kokoa momba ny Android isan'andro no iray amin'ireo asa mahafinaritra ahy indrindra.
Talohan'ny nidirako tao amin'ny tsenan'ny smartphone dia nanana fotoana hidirana amin'ny tontolon'ny PDA mahavariana tantanan'ny Windows Mobile aho, fa tsy alohan'ny hankafizako, toy ny dwarf, ny findaiko voalohany, Alcatel One Touch Easy, finday mamela ny fanovana bateria bateria misy alkaly. Tamin'ny taona 2009 dia namoaka ny findaiko voalohany tantanan'ny Android aho, indrindra ny HTC Hero, fitaovana iray izay mbola ananako am-pitiavana lehibe. Hatramin'izao, maro ny smartphone no nandalo teny an-tanako, na izany aza, raha tsy maintsy mijanona amin'ny mpanamboatra iray androany aho dia misafidy ny Google Pixels.
Nanomboka tamin'ny Android aho tamin'ny HTC Dream tamin'ny taona 2008. Teraka nanomboka tamin'io taona io ny fitiavako, manana telefaona mihoatra ny 25 amin'ity rafitra fiasa ity. Androany aho dia mandalina ny fampandrosoana ny rindranasa amin'ireo rafitra samihafa, ao anatin'izany ny Android.
Ny findaiko voalohany dia HTC Diamond izay nametrahako Android. Nanomboka tamin'izay fotoana izay dia raiki-pitia tamin'ny rafitra fiasa Google aho. Ary, rehefa mampifangaro ny fianarako aho dia mankafy ny foko be: telefaona finday.
Voafatotra sy nafatotra nanomboka ... foana! miaraka amin'ny tontolon'ny Android sy ny tontolo iainana manodidina azy. Mizaha toetra, manadihady ary manoratra momba ny finday avo lenta sy ny karazana gadget sy kojakoja ary fitaovana Android mifanentana amiko aho. Miezaka ny "mandeha", mianatra ary manaraha ny vaovao rehetra.
Famakafakana ireo karazana fitaovana Android rehetra nanomboka tamin'ny taona 2010. Zava-dehibe ny fahalalana lalindalina ny fandrosoana ara-teknolojia ahafahana mampita azy ireo amin'ny mpamaky. "Tsy ny zava-drehetra dia miavaka, amin'ny mobiles dia tsy maintsy misy ny traikefa" - Carl Pei.
Fitsapana Android hatramin'ny taloha, ny fahalianako amin'ny rafitra fiasan'i Google dia mitarika ahy haniry ny hanandrana ireo fitaovana rehetra zakako. Tiako ny mampitaha azy ireo, mahafantatra ny toetrany amin'ny antsipiriany ary mahita izay rehetra atolony.
Fitiavana Android izay nampiasa taona maro sy rafitra maro samy hafa. Satria nantsoina tamin'ny gilasy na voankazo maina io dia nampanantena ny tenako aho fa tsy handao ny Android. Tiako ny teknolojia ary manaraka ny vaovao rehetra aho.
An Amstrad no nanokatra ny varavaran'ny teknolojia ho ahy ary noho izany dia nanoratra momba ny Android nandritra ny 8 taona mahery aho. Mihevitra ny tenako ho manam-pahaizana Android aho ary tiako ny manandramana ireo fitaovana samihafa mampiditra an'io rafitra fiasa io.
Ny fitsangatsanganana, ny fanoratana, ny famakiana ary ny sinema no faniriako fatratra, saingy tsy misy amin'izy ireo hataoko raha tsy amin'ny fitaovana Android io. Liana amin'ny rafitra fiasa Google hatramin'ny niorenany, tiako ny mianatra sy mamantatra bebe kokoa momba azy io isan'andro.
Ny fampifangaroana ny haitao vaovao sy ny fitiavako ny Android, ny fizarako ny fahalalako sy ny zavatra niainako momba an'io OS io raha nahita endrika bebe kokoa momba izany dia traikefa tiako.
Tiako ny manavao ny daty amin'ny teknolojia vaovao amin'ny ankapobeny sy amin'ny Android manokana. Tena mahaliana ahy ny fifandraisany amin'ny sehatry ny fanabeazana sy ny fanabeazana, noho izany dia tiako ny mahita fampiharana sy fiasa vaovao an'ny rafi-piasa Google izay mifandraika amin'ilay sehatra.
Mafana amin'ny Android aho. Heveriko fa ny zavatra tsara rehetra dia azo hatsaraina, izany no andaniako ampahany betsaka amin'ny fotoanako hahafantarana sy hianarako momba ity rafitra miasa ity. Ka manantena aho fa hanampy anao hanatsara ny fiainanao amin'ny teknolojia Android.
Nahaliana ahy foana ny teknolojia, saingy ny fahatongavan'ireo finday finday Android dia nampitombo ny fahalianako amin'ny zavatra rehetra manerantany. Ny fikarohana, ny fahalalana ary ny fahitana ny zava-baovao rehetra momba ny Android dia iray amin'ireo faniriako.